AKIRONDRO-BELO TSIRIBIHINA : Dahalo iray mpangalatra omby lavon’ny balan’ny miaramila
Tsy mitsahatra ny halatr’omby any amin’iny Faritra Menabe iny ankehitriny. Dahalo iray indray no lavo ny balan’ny miaramila nandritra ny fanarahan-dia, ny alahady antoandro tokony tamin’ny 11 ora. 3 octobre 2017
Tao amin’ny Fokontany Akirondro Bemarivo, Distrika Belo Tsiribihina no nitrangan’ny fanafihana. Voalaza fa omby teny amin’ny tanimbary no notafihan’ireto andian-dahalo nirongo fitaovam-piadiana ka tsy nahahetsika ny mpiandry omby nandritra izany. Omby miisa 12 no lasan’ireo jiolahy, araka ny loharanom-baovao.
Nampandre ireo miaramila mampandry tany tao an-toerana ny mponina, ka raikitra avy hatrany ny fanarahan-dia. Tsy lasa lavitra akory ireo malaso dia tratran’ireo fokonolona sy ny mpitandro filaminana. Raikitra ny fifampitifirana ary dia dahalo iray no lavon’ny balan’ny mpanara-dia ka maty tsy tra-drano.
Taorian’izany dia vaky nandositra nitondra ny omby ireo malaso sasany rehefa tsy nahatohitra ny mpanara-dia. Tavela teo kosa ny fatin’ilay naman’izy ireo.